Dib ugu noqoshada Deegaan doorashada; Xildhibaan Sadiiq Warfaa – Kalfadhi
Dib ugu noqoshada Deegaan doorashada; Xildhibaan Sadiiq Warfaa
In xildhibaannadu booqdaan deegaan doorashadoodii waa mid ah sababha xildhibaannada loo fasaxo laba bil marka uu Kalfadhi walbaa xirmo. Baarlamaanka 10-aad ayaana ku guda jira fasaxa kalfadhigii saddexaad.
Tiro yar oo ka mid ah xildhibaannada Baarlamaanka ayaana dib ugu laabtay deegaan doorashadoodii, waxaana ka mid ah xildhibaan Sadiiq Warfaa.
Waxa uu xildhibaanku la hadlay warbaahinta Kalfadhi isaga oo ku sugan degmada Galdogob ee gobolka Mudug, waxa uu sheegay in uu halkaa u joogo si uu usoo guto mid ka mid ah waajibaadkiisa oo ah mataalaadda shacabka.
Xildhibaanka oo la fadhiya qaar ka mid ah dadka uu matalo
Tuulooyinka qansaxle iyo bacaad weyn ayuu sheegay in uu tagay xildhibaanku, kulana soo kulmay odayaasha dhaqanka, ururrada hawenenka iyo dhallinyarada.
Waxa uu sheegay in uu dhammaan kasoo qoray baahiya ugu waaweyn ee hadda doonayaan in wax laga qabto
Xildhibaanka qaar ka mid ah dadka degmada Galdogob ku qaabilay xafiiskiisa deegaanka
Kaamka ” Alaala ” oo ay ku jiraan dad ay saameysay abaartii “ SIMA “ ayuu sheegay in uu booqday isla markaana baahida ugu badan ee kusoo arkay ay tahay dhinaca waxbarashada oo ilmuhu ay geed hoostiis wax ku baranayaan.
Ilmaha kaamka oo dhulka wax ku baranaya
Waxa uu sheegay in dhammaan baahiyaha uu soo arkay uu qoraal ka sameyn doono kaddibna uu la wadaagi doono guddoonka Golaha Shacabka.
Halkan ka dhageyso wareysiga xildhibaan Sadiiq Warfaa.
Xildhibaan Sadiiq ayaa sheegay in markii uu furmo kalfadhiga afaraad uu rejeynayo in baarlamaanku ansixiyo aragti uu horay ugu soo jeediyay oo ahayd in markii kalfadhigu xirmo xildhibaan walba la siiyo lacago dheeraad si uu wax uga soo qabto deegaan doorashadiisa; arrinkaas oo uu ku tilmaamay in ay isku xireyso dowladda dhexe iyo dadka shacabka ah.
Halkan ka daawo hadalkii xildhibaan Sadiiq ee la xariiray lacagaha dheeriga ah.
Kaddib Fasaxii Sharciga Ahaa; Baarlamaanka Galmudug Oo Aan U Diyaarsaneyn In Uu Dib U Furmo
Xildhibaan ka tirsan Hirshabeelle oo walaac ka muujiyay dagaal beeleedyada Gobolka Hiiraan
Beesha caalamka oo sheegtay in khilaafka Farmajao iyo Rooble uu wiiqi doono xasilloonida Soomaaliya
Akhriso: Magacyada musharrxiinta doorashada saddex kursi oo caawa ka dhici doonta Jowhar
Archives Select Month September 2021 (15) August 2021 (54) July 2021 (67) June 2021 (60) May 2021 (91) April 2021 (87) March 2021 (106) February 2021 (82) January 2021 (92) December 2020 (107) November 2020 (79) October 2020 (84) September 2020 (107) August 2020 (103) July 2020 (110) June 2020 (62) May 2020 (28) April 2020 (37) March 2020 (44) February 2020 (40) January 2020 (35) December 2019 (55) November 2019 (58) October 2019 (52) September 2019 (74) August 2019 (43) July 2019 (26) June 2019 (60) May 2019 (108) April 2019 (127) March 2019 (143) February 2019 (152) January 2019 (147) December 2018 (162) November 2018 (103) October 2018 (75) September 2018 (58) August 2018 (46) July 2018 (46) June 2018 (39) May 2018 (67) April 2018 (36) March 2018 (4) February 2018 (9) January 2018 (9) December 2017 (8) November 2017 (2) October 2017 (11) September 2017 (6)